सुदूरपश्चिम ओली समूहमा कर्ण र लेखराज ! ! - कान्तिखबर – सम्पुर्ण समाचार हामीसँग
९ माघ २०७७, शुक्रबार , ०३:१६
ताजा पत्रपत्रिकाः मुख्य समाचार राजनिति
सुदूरपश्चिम ओली समूहमा कर्ण र लेखराज ! !
२०७७ पुष १४, मंगलवार ०८:४४ गते
धनगढी : संसद विघटनपछि सत्तारुढ नेकपाभित्र दिनहुँ केही न केही खिचडी पाक्न थालेको छ। लामो आन्तरिक विवाद र गुटगत राजनीतिले नेकपा अब आधिकारिक रुपमा फुट्न मात्र बाँकी छ।
केन्द्रको विवादले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा निकै प्रभाव परेको छ। नेकपा सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्पष्ट बहुमत देखिएको दाबी गरिएको छ।नेकपा प्रदेश सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज भीम रावल नै माधव नेपाल पक्षधर भएपछि प्रदेशको राजनीतिमा खासै ठूलो प्रभाव पर्ने अवस्था देखिएको छैन।
तर पछिल्लो समय नेकपा सुदूरपश्चिममा हाबी हुँदै गएका दुई ठूला नेता भने ओली समूहमा गएका छन्। नेकपा प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा लामो समयदेखि ओलीनिकट मानिन्थे। अहिले पनि उनी ओली समूहमै छन्।
यस्तै पूर्व माओवादीमा हुँदा सुदूरपश्चिमका पहिलो नम्बरका नेता मानिने लेखराज भट्ट पनि ओली समूहमा सरेका छन्। पूर्वमाओवादीमा हक जमाएर बसेका लेखराजलाई सुदूरपश्चिममा पूर्वमाओवादीका कार्यकर्ताले पनि नम्बर ‘वन’ कमाण्डर नै मान्थे। उनी, पुष्पकमल दाहाल नजिक भएकाले पार्टीमा उनको बोली पनि बिक्थ्यो।
प्रदेशमा जिम्मेवारी नपाए पनि उनको प्रदेशमा सरकार र पार्टीमा राम्रो प्रभाव थियो। सुदूरपश्चिम सरकारमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, अर्थमन्त्री झपट बोहरा र कृषि मन्त्री विनिता चौधरी उनकै कार्यकर्ता हुन ।
लेखराजले नै मुख्यमन्त्री बनाएका त्रिलोचनले आफ्नो गृहजिल्ला डोटीबाट प्रदेशको राजधानीसमेत लेखराजको गृह वडा कैलालीको गोदावरीमा सारेका थिए। पूर्वमाओवादीकै वीरभान चौधरीलाई पाखा लगाएर आफूनिकट त्रिलोचनलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि नेकपा सुदूरपश्चिममा लेखराज केही समय हावी हुँदै आएका थिए।
उनले प्रदेश राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेपछि प्रदेश अध्यक्ष थापाले प्रदेश कमिटीको बैठकमा लेखराजलाई ‘तपाईंको प्रदेश कमिटीको बैठकमा आउने कुनै अधिकार छैन’ भन्नसम्म भ्याएका थिए।
अहिले भने दुबैजना ओलि समुहमा छन् ।